समाचार कपिलवस्तुको समग्र चुनावी नतिजा यस्तो रह्यो
Ujyaalo सोमवार, मंसिर २५, २०७४ ०६:१४:००
कपिलवस्तु, २४ मंसीर –कपिलवस्तुमा प्रतिनिधी सभातर्फ २ स्थानमा वाम गठवन्धन र १ स्थानमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १ मा वाम गठवन्धनका साझा उम्मेदवार चक्रपाणी खनालले २९ हजार ७ सय ९९ मत ल्याई निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका निकटम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीप कुमार उपाध्यायले २८ हजार ८ सय ५३ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रतिनीधिसभा क्षेत्र नं. २ मा वाम गठवन्धनका तर्फबाट बृजेशकुमार गुप्ताले ३५ हजार १ सय १४७ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उहाँका निकटम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुरेन्द्र राज आचार्यले ३१ हजार ५ सय ६६ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
प्रतिनिधीसभा क्षेत्र नं. ३ मा भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अभिषेकप्रताप शाहले १९ हजार ८ सय ६६ मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभयो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी संघीय समाजवादी फोरमका मंगल प्रसाद गुप्ताले १५ हजार ८ सय ३ प्राप्त गर्नुभएको छ ।
विजयी वनेका तीनै जना उम्मेदवारले.संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै आफ्नो कार्यकाल भर आफ्नो क्षेत्र र समग्र जिल्लाको विकासमा योगदान पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
यसै गरी प्रदेशसभा चुनावको परिणाम अनुसार प्रदेश सभा १ को क मा वाम गठवन्धनबाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार विष्णु पंथी र क्षेत्र नं. १ को ख मा संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार सहसराम यादव विजयी हुनुभएको छ ।
प्रदेश सभा २ को क मा वाम गठवन्धनका तर्फबाट दिर्घनारायण पाण्डेय र प्रदेश सभा २ को ख मा धर्म बहादुर श्रीवास्तव विजयी हुनुभएको छ । प्रदेश सभा ३ को क मा वाम गठवन्धनका तर्फबाट अर्जुन केसी र प्रदेश सभा ३ को ख मा विरेन्द्रकुमार कनौडिया विजयी हुनुभएको छ ।
विजय भैसकेपछि निकालिएको वाम गठवन्धनको ¥यालीमा वाम कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।